Bag-tsambok'afo, kitapo arak'asa, Bagan'ny solosaina - Camei Ele & Stationery
Ny vokatra ataonay dia vita amin'ny asa 2: asa vita amin'ny asa be loatra toa ny kitapo fandefasana, kitapom-bary, tabilao, kitapo pensilihazo, kitapo fitehirizana; amin'ny fananganana stitching workmanship toy portfolio, bout zipper, pensilihazo poketra, kitapo fiantsenana, harona kosmetika, kitapo solosaina sns.
Hevitra fototra momba ny laharana TSIA: 3181 pensilihazo ...
3179 Double Zipper Pencil Pouch
Hevitra fototra momba ny laharana TSIA: 3179 Double Zipper Pe ...
Hevitra fototra momba ny laharana TSIA .: 3188 Holder Card ...
Hevitra fototra momba ny laharana TSIA: 3154 Photo Frame ...
3140 Kitapo fitehirizana
Hevitra fototra momba ny laharana TSIA: 3140 kitapo fitahirizana ...
Hevitra fototra momba ny singa fototra : 2985 Pencil pot M ...
Hevitra fototra momba ny singa fototra : 2952 portfolio Ma ...
Hevitra fototra momba ny laharana TSIA .: 2806 portfolio ...
Quanzhou Camei Stationery Bag dia natsangana tamin'ny taona 2003, izay orinasa sy indostrian'ny varotra, manampahaizana manokana amin'ny fampandrosoana, ny famokarana, ny fivarotana ny harona ary ny fitaovana fitehirizana. Izahay dia nandalo ny fanamarinana momba ny ISO9001, BSCI, SEDEX, ary koa ny fanamarinana ny orinasan-tserasera malaza vahiny (toa an'i Walmart, Office Depot, Disney, sns). Ny vokatra ataonay dia vita amin'ny asa 2: asa vita amin'ny asa be loatra toa ny kitapo fandefasana, kitapom-bary, tabilao, kitapo pensilihazo, kitapo fitehirizana; amin'ny fanamboarana stitching toy ny portfolio, famaton'ny zipper, poketra pensilihazo, kitapo miantsena, harona kosmetika, kitapo solosaina sns .. Ny orinasanay dia manana ny fahaizan'ny famolavolana sy famolavolana, maro ny kitapom-pitaterana, endrika tsara tarehy, kalitao avo lenta. Aondrana any amin'ny firenena sy faritra maro toa an'i Eropa, Etazonia, Japon, sns., Dia nahazo laza tsara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Hatramin'ny niorenany dia namolavola ny vokatra vita amin'ny kilasy voalohany izahay orinasa ary manaraka ny fitsipiky ny kalitao voalohany. Nahazo laza tsara teo amin'ny orinasa ny vokatrao ary fahatokisan-tena sarobidy amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha. Namidy am-barotra ao an-trano sy vokatra an-tsokosoko ny vokatrao, anisan'izany ny Eropa, Amerika, atsimo atsinanana, Middle East ary ireo firenena hafa. Isika dia mifantoka bebe kokoa amin'ny politika momba ny fitantanana ny tsy fivadihana, ny tombontsoa miaraka sy ny mpanjifa aloha; Nanohy ezaka mafy ny orinasanay mba ahafahana mamorona kokoa sy azo itokisana; Maniry mafy ny hifandray tanana amin'ny namana vaovao sy taloha rehetra izahay hanangana ny ampahatelontsika!